PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - OweWits uthembisa lukhulu ngeye-Caf
OweWits uthembisa lukhulu ngeye-Caf
FUNGA uyagomela umdlali wasesiswini weBidvest Wits ukuthi bazozibamba ziqine emqhudelwaneni wakulo nyaka weCaf Champions League ozoqala ngoFebhuwari.
IZitshudeni ezizoyibamba neMamelodi Sundowns koweChampions League, ziqhathwe neSaint Louisianne yase-Reunion Islands, ezizodudulana nayo ngempelasonto kaFebhuwari 10-12 emlenzeni wokuqala, nowesibili ngempelasonto kaFebhuwari 17-19.
UBen Motshwari (23) weWits uhamba emazwini omqeqeshi wakhe uGavin Hunt ocashunwe komunye umthombo wabezindaba ekuqaleni kwaleli sonto esho ngokungathandabuzi ukuthi ezakhe zizozibopha ngexhama kubonakale emqhudelwaneni weChampions League wakulo nyaka.
“Kuyiqiniso ukuthi asenzanga kahle neze emidlalweni yeCaf kule minyaka emibili edlule njengoba siphume ekuseni iminyaka ilandelana.
Uwukuthi ukhona umdlali ongathandi ukudlala emiqhudelwaneni yeCaf, kwazise ukudlala emiqhudelwaneni enjengalena kukukhulisa kakhulu njengomdlali webhola.
Kuphinde kukubeke nasethubeni elihle lokubonwa ngabahlonzi bamakhono basemaqenjini ase-Europe abayihambelayo le midlalo.
“Kodwa-ke kwesinye isikhathi emaqenjini ethu sizithola sibhekene nesimo sokukhetha phakathi kokwenza kahle emidlalweni yase-Afrika neyalapha ekhaya kuPSL,” kusho uMotshwari waseRandfontein, eGoli, ngesizini edlule ohlabane ngomklomelo wokushaya ingcwenga yegoli lesizini owaziwa nge-Absa-lutely Awesome Goal.
“Angingabazi ukuthi ukwenza kahle kweSundowns (Mamelodi) kwiChampions League kugqugquzele wonke amaqembu adlala ku-PSL.
“Nokuyisona sizathu engikholwa wukuthi senze abaphathi beqembu lethu babona kufanele siyithathe njengemqoka imidlalo yeCaf yakulo nyaka ngisho noma ngabe sisembangweni wesicoco seligi. Ngakho-ke kulo nyaka sizimisele kakhulu ngokwenza kangcono emidlalweni yeCaf silandele ezinyathelweni zeSundowns,” kuqhuba uMotshwari.
UMotshwari osephenduke inyama emaqenjini amakhulu aseSoweto okubalwa kuwo i-Orlando Pirates, ungomunye wabadlali abadlule esandleni sikaSipho Khuse wodumo kwiQwaqwa Stars neLamontville Golden Arrows. Ungumqeqeshi nomphathi weTrabzon FC yaseMohlakeng, eRandfontein, edlala kuSafa West Rand SAB Regional League.
Lo mdlali uthembisa kanjena nje iZitshudeni zibalwa namanye amaqembu e-Absa Premiership akhombise ukungakushayi mkhuba ubumqoka bale midlalo kule minyaka emibili edlule.
Nyakenye leli qembu liphume emzuliswaneni wokuqala kwiConfederation Cup liguqiswa ngo 7-3 yi-Azam FC yaseTanzania sekuhlanganiswe imilenze emibili, kanti ngo-2015 lithathe izinto kalula laguqiswa ngo 6-5 yiRoyal Leopards yaseSwaziland sekukhahlelwa amaphenathi kade linqobe ngo 3-0 emlenzeni wokuqala.